ISIVUMELWANO SOKUCWANGCISWA KWEDATHA LAKHO
Uma uchofoza izinkinobho, usithumela imininingwane yakho, ngaleyo ndlela uqinisekise ukuvuma kwakho ekusebenzeni kwayo.
Ngokuya ngezinhlinzeko ezihlinzekelwe yi-Federal Law No. 152-FZ kaJuni 27.06.2006, XNUMX "Emininingwane Yomuntu", opharetha ubophezelekile ukuthatha zonke izinyathelo ezidingekayo zenhlangano nezobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuvikelwa kwedatha yomuntu siqu yabasebenzisi ezenzweni ezingekho emthethweni noma ukufinyelela kubo ngengozi, kanye nezenzo ezibandakanya ukubhujiswa, ukuguqulwa, ukuvimba, ukukopisha, ukusatshalaliswa kwemininingwane yomuntu siqu. Ezinye izenzo zifaneleka njengokungekho emthethweni.
Insiza ye-inthanethi (isayithi) kuyinkimbinkimbi yezincazelo zombhalo, izinto zemidwebo, izingxenye zedizayini, izithombe, amakhodi wohlelo, izinto zezithombe namavidiyo, kanye nezinye izinto ezidingekayo ekusebenzeni kwayo okuzuzisayo. Ikheli lethu: cgreality.ru
Ngaphansi Kokuphathwa Kwesiza kusho abantu abangabasebenzi be-AAAA ADVISER LLC abanelungelo lokuyiphatha.
Umsebenzisi - isivakashi sesiza esangena kwi-Site, esamukele isimo semvume okukhulunywa ngayo, kungakhathalekile ukuthi iphasile ukubhaliswa, inqubo yokugunyazwa noma cha.
Ngaphansi Ukuvikelwa kwedatha yomuntu siqu kusho isethi yezinqubo ezivumela ukuhambisana nezimfuneko zezinkambiso zomthetho zeRussian Federation maqondana nokugcinwa, ukucubungulwa, ukugcinwa nokudluliswa kwedatha yomuntu siqu yezivakashi.
Iyiphi idatha yezivakashi esetshenziswayo lapho uvakashela isiza:
Imininingwane yepasipoti yezivakashi (igama eligcwele);
I-imeyili yezivakashi noma ikheli le-IP;
Ngokwamukela imigomo Yesivumelwano Esiphawuliwe, Isivakashi siqinisekisa imvume yaso yokwenza izinyathelo ezihlobene nokucutshungulwa kwedatha yaso.
Ukucutshungulwa kwedatha okukhulunywa ngayo kusho izenzo ezilandelayo:
ukucaciswa (izibuyekezo, izinguquko)
ukuhanjiswa (ukusatshalaliswa, ukuhlinzekwa kokufinyelela)
ukuqaliswa kokuzenza umuntu
ukubhujiswa kwedatha yomuntu siqu.
Ukuze ufeze izibopho ezinikezwe yi-Federal Law engenhla kanye nezenzo zomthetho ezifanele, abaphathi besiza bathatha zonke izinyathelo ezidingekayo. Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa kwesayithi, ngokuya ngomthetho we-federal ongenhla, kunelungelo lokunquma ngokuzimela ukwakheka nohlu lwezinyathelo ezidingekayo nezanele ukuze kuqinisekiswe ukufezeka kwemisebenzi efanelekile.
Imvume ebaluliwe isebenza kuze kube yilapho umsebenzisi wesayithi eyihoxisa. Ukuchithwa kwenziwa ngendlela yokuthumela isicelo esibhaliwe esihambelanayo ngeposi elibhalisiwe noma ukulethwa kommeli osemthethweni wenkampani ngokumelene nokutholwa.
Ngemuva kokuthola isicelo esibhaliwe sokuhoxisa le mvume ekucutshungulweni kwedatha yomuntu siqu, Ukuphathwa kwesayithi cgreality.ru kuphoqelekile ukuyeka ukuzicubungula futhi kungafaki imininingwane yomuntu siqu kusuka ku-database.